Ampifanaraho amin'ny safidinao rehetra ny Safari amin'ny fampiasana iCloud | Vaovao IPhone
Manana mpizaha Internet marobe ho an'ny iOS izahay, na dia toerana ambony noho ny ambiny aza ny Safari, noho ny fampidirana azy tanteraka amin'ny iOS, Chrome dia safidy tsara iray izay mahazo làlana miandalana amin'ireo mpampiasa iOS. Ny iray amin'ireo fiasa tiako indrindra momba ny Chrome dia ny fampifanarahana eo amin'ireo solosaina samihafa, noho ny kaonty Google anao. Safari dia manolotra toy izany koa, misaotra an'i iCloud. Fandrindrana ny tianao indrindra, ny fijerinao ireo takelaka misokatra amin'ny fitaovana hafa na fidirana amin'ny lisitra famakiana avy amin'izy ireo zavatra tsotra be izany noho ny kaonty iCloud anay. Ahoana no ahafahantsika mampiasa an'io safidy io mba hampifanarahana ny Safari amin'ireo fitaovana misy antsika rehetra?
Ny zavatra voalohany dia ny fidirana amin'ny tontonana fanaraha-maso iCloud amin'ny solosaintsika. Raha mampiasa Mac isika dia ananantsika ao amin'ny System Preferences, raha mampiasa Windows isika dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny rafitray. Ianao dia afaka misintona tontonana fanaraha-maso iCloud avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Apple. Mifandray amin'ny kaonty iCloud izahay ary misafidy ny safidy "Safari" hampiasana ny fampifanarahana amin'ny solo-sainanao.
Ny dingana manaraka dia ny mankany amin'ny fitaovantsika, amin'ny menio «Settings> iCloud» ary miditra miaraka amin'ny kaontinay, mitovy amin'ny ao amin'ny solosaina, ary ampandehano ny safidin'i Safari.
Hatao fampifanarahana ireo ankafizin'ny fitaovantsika sy ny solosaina. Izay esorinao amin'ny iray dia hesorina amin'ny iray hafa, ary izay ampianao iray dia hiseho koa amin'ny iray hafa.
Toy izany koa ny lisitra famakiana. Raha eo amin'ny solo-sainanao ianao ary manisy marika zavatra hovakiana ao aoriana, dia azonao atao ny mahita azy amin'ny fitaovanao namboarina miaraka amin'ny kaonty iCloud mitovy amin'ny fidirana amin'ny lisitry ny famakiana. Azonao atao ihany koa ny mahita ny takelaka izay nosokafanao tamin'ny fitaovana avy amin'ny olona mampiasa kaonty mitovy. Mba hanaovana izany dia mila tsindrio fotsiny ilay rahona izay miseho ao amin'ny baraovana.
Safidy sasantsasany mihoatra ny mahaliana ho antsika izay mampiasa Safari amin'ny fitaovana samihafa. Fanamarihana farany. Raha vao mampavitrika ny serivisy amin'ny fitaovanao ianao, omeo fotoana ny fiovana hitranga amin'ny rehetra, mety maharitra minitra vitsy vao hahitana ny valiny farany. Ary ny zavatra tokony ho tadidinao ihany koa dia ny fampifangaroana ireo tianao indrindra, izany hoe, ireo an'ny fitaovanao rehetra dia hafangaro amin'ny fotoana voalohany ampiarahanao. Ataovy ao an-tsaina izany raha sendra mety liana amin'ny fanadiovana ianao alohan'ny handefasana azy ireo.
Fanazavana fanampiny - iCloud sy AppleID amin'ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Ampifanaraho amin'ny safidinao rehetra amin'ny alàlan'ny iCloud ny Safari
Mepefe dia hoy izy:
Salama, mampifandray, misy tahirin-kevitra momba ny tantara fitetezana safari ve? Izany hoe ny fampifanarahana ny pejy rehetra izay notsidihiko tamin'ny fitaovana iray?
Mamaly an'i Mepefe
Llumino, ny calculatera tsara indrindra ho an'ny iPhone